ME RAZAFIMANANTSOA HANITRA : NIROTSAKA NANADIO TANANA TENY ANALAKELY – MyDago.com aime Madagascar
Nanatanteraka fanadiovana faobe teny amin’ny boriborintany voalohany androany Alatsinainy 09 Janoary 2017 ny filoha lefitry ny Antenimierampirenena sady solombavambahoaka voafidy teny amin’ny boriborintany voalohany, niaraka tamin’ireo mpiaramiasa aminy, ny mpiasan’ny kaomina Antananarivo Renivohitra. Nanomboka tamin’ny 7ora maraina ny fanadiovana ary nifarana tamin’ny 9 ora maraina teny amin’ny Gare Soarano. Teo Ambohijatovo no niainga ny rehetra tamin’ny fanadiovana ary nizara ho andiany efatra, teny Ambodifilao, Analakely sy ny manodidina, Tsaralalana, ary Tsiazotafo.” Izay manadio tsy mandoto” io no lohahevitra noraisina tamin’izao fanadiovana faobe izao. Nambaran’ny solombavambahoaka Me Hanitra Razafimanantsoa fa fiara-mientan’ny rehetra izao, ary fampisehoana ihany koa azo atao tsara ny manadio. Rehefa manadio ianao dia manome modely ho an’ny hafa hoe mandray kifafa dia manao koa ny hafa. Ny fanadiovana tsy haingitraingitra fa tokony fiaianana isan’andro ary rehefa manadio ianao dia mandray kifafa koa ny olona. Tsy androany fotsiny hoy izy izao fanadiovana izao fa ny fanentanana fotsiny no samihafa, any amin’ny sekoly , mpianatra any lisea, mpiasa, sns Rehefa natao ny fanaidovana faobe dia tsy nandaniana vola fa finiavana, sy hery ary tanjaka dia manao fanetretena miaraka amin’izay.
Traboina teny Ankasina : Nahazo fanampiana avy amin’ny depiote Hanitra Razafimanantsoa
Me Razafimanantsoa Hanitra : Nanampy ny mponina teny Andohatapenaka
Auteur Solo Razafy*Publié le 9 janvier 2017 9 janvier 2017 Catégories Politique
3 réflexions sur « ME RAZAFIMANANTSOA HANITRA : NIROTSAKA NANADIO TANANA TENY ANALAKELY »
Bonne initiative : tout le monde participe
Il faut enlever voire laver aussi les routes pour enlever la poussière : tokony ho mainty tsara ny goudron fa tena manome endriny tsara
Il faut renouveler cette initiative au moins une fois par semaine
Toy ny Fasana ny tanàna avy eo : Madio ivelany, fa ny tanàna raha tsy lasan’ny Sinoa, ho lasan’ny Tiorka. Ny Mpitondra vendrana, mameno paosy, ny vadiny mandany vola na mangalatra ny volam-bahoaka, any Parisy. Ny vahoaka matimaty foana, satria ny fanjakana tsy misy miraharaha. Ny fanandevozan’ny vazaha mitohy hatrany noho i Patrick Rajoelina (mpanolo-tsaina malaza) sy Chataigner miafina amin’ny titre entiny (mody Direktera Jeneraly etsy sy eroa, anefa manjanaka tsy misy toa azyan’i…….hery « vongany ».
Mitandrema ihany ianao Ra8, fa ny MIARAMILA efa zatra tambazana « grady Jeneraly », sy vola amana-tapitrisa, ary vonona ny hanajedaka anao. Rajoelina sy Lilison noheverina ho samborina raha vao mipoitra anefa aiza izao ? Christine efa manomboka mai-vava etsy sy eroa.
Mbola ho ela vao tafarina e (raha ho tafarina). Efa leo mitaraina ilay vahoaka : miandry ny fanonganana, na vonona hiady ho amin’izany angamba.
Afaka roa taona izay, niteny teto aho fa hijaly amin’ny rano Mcar rehefa afaka 5 na 10 taona eoeo fa tokony hitandrina. Izao dia efa mijaly tanteraka ary ny rano maloton’ny Mandroseza no hitomaniana.
Ny olana ? Mbola ny rano izao no hijalia, ary rehefa afaka kelikely koa, dia tsy hisy intsony harena ambanin’ny tany ho an’ny Malagasy, ary dia ho lany tamingana ny malagasy satria hanjaka ny Sinoa sy Tiorka an-koatra ireo efa mpanjanaka. Tsy afaka ny hitaraina akory, fa efa ho voazanakaAry Mcar ho an’ny vahiny arabo sy sinoa sy…..
Manonofy ihany izany malagasy mba hitroatra izany o ?!!!
Précédent Article précédent : Arahabaina manokana ny filoha Ravalomanana Marc sy ny fianakaviany nahatratra izao taona vaovao izao
Suivant Article suivant : RAVALOMANANA MARC : NY TSAHO ETSY SY EROA , TSY HAMPIHEMOTRA ANTSIKA